ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များက ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို တုန့်ပြန်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များက ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို တုန့်ပြန်ချက်
ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များက ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို တုန့်ပြန်ချက်
Posted by kai on Aug 18, 2011 in Politics, Issues, Press Announcements | 30 comments
ပြည်ပရောက်တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များကဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကို တုန့်ပြန်ချက်
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့သော မြန်မာများကို မြန်မာပြည်သို့ပြန် လာရန်လမ်း ဖွင့်ဖိတ် ခေါ်သည့် သတင်းကို သြဂုတ်လ(၁၇) ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်မှသတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ထိုသတင်းကို တရားဝင် ကြေညာချက်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။
ကျွနုပ်တို့ ပြည်ပရောက်နေသော တော်လှန်ရေးမျိုးဆက် အသီးသီးက ထိုထွက်ပေါ်လာသော သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တဦးချင်း အမြင် သဘောထားများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး အောက်ပါ အချက်များကိုသဘောတူ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၁။ ပြည်ပသို့ရောက်နေသူများကို လမ်းဖွင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွက်ကြိုဆို သော်လည်း အဆင့်ကျော်နေသည်ဟု မြင်သည်။ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ယခုအချိန်ထိလွှတ် မပေးပဲထားရှိပြီး ပြည်ပတွင်ရှိသော တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်များကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုခြင်းသည် ပထမဆုံး လုပ်ရ မည့် အလုပ်မဟုတ်ခြေ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ချွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေးဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်သည့် ပထမဆုံး ယုံကြည် မှုတည်ဆောက်သည့်ခြေလှမ်းတရပ် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
၂။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အနေဖြင့် ပြည်သူကို ယုံကြည်ဖို့လိုသည် ပြည်သူလိုလားချက်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် အကောင် အထည် ဖေါ်ရဲဖို့လိုသည်။ယနေ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်ခံများ အပါအ၀င် ပြည်သူတရပ်လုံး၏ လိုလားချက်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ချွင်းချက်မရှိ လွတ်မြောက်ရေးပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်မှာ ပြည်သူလူထုကြီးက လိုလိုလားလား အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှသာ အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ယနေ့ပြည်သူများလိုလားနေသည်မှာ တရားမျှတသော ဥပဒေအောက်တွင် ကြောက်လန့်ကင်းကွာ နေနိုင်ရေး၊လွတ်လပ်စွာ စီးပွားရှာဖွေခွင့် ရရှိရေး၊လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်ရရှိ ရေး၊လွတ်လပ်စွာစည်းရုံးပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရေးတို့ပင်ဖြစ်သည်။
၃။ မဆလ ခေတ်မှ ယနေ့စစ်ခေါင်းဆောင်များအဆက်ဆက် လက်အောက်တွင် ပြည်သူများ ကြောက်လန့် စွာဖြင့် အကြောက်တရားအောက်တွင် နေထိုင်နေကြရပြီး တရား ဥပဒေကင်းမဲ့သည့် စစ်အာဏာစက်အောက် တွင် ကြီးပျင်းလာခဲ့ကြသည့်အတွက် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအား ရွံကြောက်ကြီး ဖြစ်နေကြခဲ့ရသည်။ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းနေကြရသဖြင့် ပြည်သူ့ဘ၀ ပြည်သူ့အကျိုး၊ ပြည်သူ့လိုလားချက်၊ ပြည်သူ့နစ်နာချက်များ ဖော်ပြခွင့်မရပဲ ဆိတ်သုံးခဲ့ရသည်။
အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားများ အနေနှင့်လည်း အဓမ္မဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေရသူများ ပီပီ မိမိတို့၏ တရားမဲ့ လုပ်ရပ်များ အပေါ် ပြည်သူများ၏ တန်ပြန်ဒဏ်ခတ်ခံရနိုင်မှုအတွက် ရတက်မအေး အစောင့် အထပ်ထပ်ချ၍ ပြည်သူကြားတွင်မတိုးရဲဘဲပြည်သူနှင့်ကင်းကွာလျှက်အကျဉ်းကျ နေ ရသည့် ဘ၀ပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများ အကျဉ်းကျနေသလို အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားများ လည်းအကျဉ်း ကျ နေရသည့် ဘ၀ဖြစ်သည်။
၄။ ထိုအချက်ကို ဖောက်ထွက်ရန်မှာ ပြည်သူရိုသေလေးစားသော အစိုးရတရပ်ဖြစ်လာရန် ပြုပြင်ပြောင်း လဲနိုင်ဖို့လိုသည်။ပြည်သူများလိုလားချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော အစိုးရဖြစ်လာလျှင် ပြည်သူများ၏ ချစ်ခင် ကိုး စားမှုကို ရရှိလာပေလိမ့်မည်။ကောင်းမွန်သော အစိုးရကို ပြည်သူများက ချစ်ကြောက်ရိုသေပြီးတရား ဥပဒေ အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ပြည်သူ့ အကျိုးအတွက် အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိသဘောနှင့် မိမိ လိုလိုလားလား စိတ်ပါလက်ပါ ၀ိုင်းဝန်ီး လုပ်ဆောင်ကြလျှင် တိုင်းပြည်ကြီး ဆင်းရဲတွင်းမှ လျှင်မြန်စွာ ရုန်းထွက်၍ အာရှတိုက်တွင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသော လူအခွင့်ရေး ပြည့်ဝသည့် အာရှတိုက်၏ကျား တကောင်အဖြစ် ဦးမော့နိုင်မည့် အခြေနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ရောက်ရှိစေချင်ပါသည်။
၅။ ထို့ကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးအနေနှင့် ပြည်သူကို ယုံကြည်ရန်၊ ပြည်သူကို တရား ဥပဒေအရ ကာကွယ် ပေး ရန် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်စိတ်ဓါတ်ဖြင့် အမိနိုင်ငံအတွက် အသက်ပေး၍ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေ ရ သော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ရန်သူအဖြစ်မမြင်ပဲ မိမိကဲ့သို့ တိုင်းပြည် ချစ် စိတ်ရှိသော်လည်း သဘော ထား အမြင်မတူသည့် အတိုက်အခံအဖြစ် သဘောထား၍ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ အမြင်ကွဲလွဲမှုရှိခြင်းကို လက်ခံအသိမှတ်ပြု၍ အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးရန် ပန်ကြားလိုက်သည်။
၆။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကိုလွတ်ပေးပြီး ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်များကို လက်ကမ်းကြိုဆိုလျှင် သင့်လျှော် လျောက် ပတ်သော လုပ်ရပ်အဖြစ် ကျွနုပ်တို့က ကြိုဆိုကြမည်ဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် ယခု ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောကြားချက်တွင် ကန့်သတ်ချက်များပါရှိနေသဖြင့် အမျိုးသားရင်ကြား စေ့ရေးကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ဦးတည်ထားခြင်းမရှိဟု သုံးသပ်သည်။ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားလုံး ကို လွတ်ပေးပြီးနောက် ဒုတိယ အဆင့်အနေဖြင့် ပြည်ပရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများ အားလုံးကို အထွေထွေလွတ် ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ပေး၍ ပြန်လည် ခေါ်ယူသင့်သည်။
၇။ ထိုမှ တဆင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေှး၊နှင့် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆဲရေးအတွက် ယနေ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ် များတွင်တောက်လောင်နေသော စစ်မီးလျှံများကို အတူတကွ တက်ညီလက်ညီဝိုင်းဝန်း၍ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ငြိမ်းသတ် ရန် ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပြန်လည်ဝင့်ကြွားလာနိုင်ရေးကို မျှော်မှန်းလျှက်
ထွန်းအောင်ကျော် ၊ မိုးသီးဇွန် ၊ သက်ထွန်း ၊ သန်းဝင်း ၊ မူးသာ (အမေရိကန်နိုင်ငံ)
ဆန်နီအောင်သန်းဦး (ဂျာမနီ)၊ ကျော်သန်း (နယူးဒေလီ)
ကိုကိုအောင် (တိုကျို)၊ သန်းဆွေ ((တိုကျို ဂျပန်)
မင်းနိုင် ၊ လားရှိုးသိန်းအောင် (ဂျင်မီဂျက်) (အမေရိကန်နိုင်ငံ)
မြန်မာလူထုကလည်း သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါ…။ ကျန်တာတော့..ဆက်ဆွေးနွေးကြပါလို့..။
အောက်ပါတို့ကို.. Mizzima News မှကူးယူပါသည်.
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု (Forum for Democracy in Burma – FDB)
“ပထမတခုကတော့ ဒီသူတို့က ဒီလိုမျိုး နှုတ်နဲ့ ပြောတာမျိုးထက်ပေါ့ဗျာ ဥပဒေတို့ အမိန့်တို့ ဒီဂရီ တို့ပေါ့လေ
အဲဒီလိုမျိုး တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ ဆိုတော့ အဲဒါကမှ ပြောရင်တော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်
လား၊ ဘာလား ညာလားဆိုတဲ့ ဥစ္စာမျိုး ကျနော်တို့ ထင်ထင်ရှားရှား သိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါ့အပြင်တခုကတော့ ကျနော်တို့ ဒီဘက်ကိုရောက်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမရလို့၊ နောက် ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေလို့၊ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ မရှိ
လို့ ဒါတွေကို တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လာတာပဲ။”
“အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ ရမယ်၊ ရှိမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာပဲ ပြန်အလုပ်လုပ်မှာပေါ့။
ဒီမှာ ဘာအလုပ်လုပ်နေစရာရှိမှာလဲ။ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ အာမမခံဘူး၊ မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်း ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ အခြေအနေ မဖြစ်ဘူးပေါ့။ တကယ်လို့များ ဒီ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရကနေပြီးတော့မှ တကယ်ကို စိတ်ရင်း
စေတနာမှန်နဲ့ ခုနပြောတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ ဆိုတဲ့ စိတ်တွေအမှန်နဲ့ ခေါ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျနော်တို့ကို သေသေချာချာ တိတိကျကျလေး တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ ဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုမယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ အမြဲတန်း တောင်းဆို နေတဲ့ ခုနပြောတဲ့ နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို အဲဒါတွေကို အာမခံမှု ရှိတယ်။ အားလုံးကိုလည်း ဘာပြစ်ဒဏ်နဲ့မှ အရေးမယူပါဘူးဆိုတဲ့ ဥစ္စာလေး တိတိကျကျ ပြောပြဖို့တော့ လိုမှာပေါ့ဗျာ။”
“ပြန်ဝင်ချင် ဝင်လို့ရပြီ ဒို့ပြန်ဝင်မလား ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အဓိက ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကနေ့ ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီမျိုး၊ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမျိုး၊ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုမျိုးကို
ကနေ့အခြေအနေမှာ ဆောင်ရွက်လို့ရ၊ မရဆိုတဲ့ကိစ္စက အဓိကပြဿနာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။”
“ဒီဥစ္စာမျိုးက ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့အောက်မှာ သို့မဟုတ် ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ အောက်မှာ ဘယ်လိုမှ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ အဲဒီလိုပဲ နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သူဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အဲဒီဥစ္စာက ကျနော်
တို့အတွက် ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်ထူးတဲ့ စကားရပ် မဟုတ်ဘူး။”
“တကယ်ကတော့ အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုး ၈ဝ ခုနှစ်လောက်က ဖန်တီးတာ မျိုးပေါ့ဗျာ အဲဒီလို ကြေညာချက်မျိုး ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ တချို့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ တချို့ပေါ့ဗျာ ဒီလိုမျိုးကြေညာလိုက်ရင်တော့ စဉ်းစားတာမျိုးတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုလို ဘာမှ တိကျတဲ့ အလားအလာပေါ့ဗျာ အနာဂတ်ကို ဘာမှတောင် မျှော်စရာ လင်းပွင့်တဲ့အနာဂတ်မျိုး မရှိဘဲနဲ့တော့ ကျနော်ထင်တယ် ဘယ်သူမှ စိတ်ကူးယဉ်မယ် မထင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုရင်လည်း တော်တော်လွဲချော်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုပဲ ဖြစ်မှာပါ။”
“ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကတော့ အပြုသဘောဆောင်တယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့
ပြဿနာက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ ရောက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရော ကျန်တဲ့အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့
နော် ထွက်တဲ့သွားတဲ့လူတွေရဲ့ အဓိကက ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဒီလိုထွက်လာကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုလူတွေ ပြန်မယ်ဆိုရင် တချို့လူတွေ အတွက်က လုံခြုံရေးထက် စာရင် နိုင်ငံရေးရဲ့ အနှစ်သာရ ပိုပြီးတော့
ပြည့်စုံဖို့ လိုမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။”
“အဲဒီတော့ ဒီလူတွေကို ထွက်သွားတယ် ဟုတ်လား ထွက်သွားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ခံယူချက်တွေကို အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ဒီကထွက်သွားကြတဲ့လူတွေကိုပဲပေါ့နော် နိုင်ငံရေးအရ အသိအမှတ်ပြု မခံရတဲ့ အခါကျရင် ဒါက အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် တကယ်တမ်း လမ်းတခုလို့တော့
ပြောလို့တော့ နည်းနည်းခက်ဦးမယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။”
“သူတို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသမားတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းချင်း ခွဲပြီးတော့ လွှတ်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနပြောသလို နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တခုကို အသိအမှတ် ပြုမခံရဘဲနဲ့ ဒီလို ပြန်လာချင်ရင် လာလို့ ရပါတယ်ဆိုတာ သမ္မတရဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့ အပေါ်မှာတော့ နားလည်ပေး နိုင်တယ်လေ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် တကယ်မှာ ဒီလူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အာမခံချက်ပေါ့ မြန်မာပြည် ပြန်တယ် နိုင်ငံရေး မလုပ်ရဘူး
ဆိုရင် သူဘာအတွက် ပြန်မှာလဲပေါ့နော်။ အဲတော့ နိုင်ငံရေး အာမခံချက်ရှိတဲ့ ပြန်ကြိုဆိုမှုမျိုးဆိုရင် ပိုပြီးတော့ သင့်တော်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။”
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် – မြန်မာနိုင်ငံ
“အခု တောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ပြီးတော့မှ ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲ ဝင်နေတဲ့ သူတွေ အနေအထားနဲ့ ပေါ့လေ ပြောရမယ်ဆိုရင် အခုလိုမျိုး ပြန်လာချင် ပြန်လာလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက် တခွန်းတည်းနဲ့က ယုတ္တိမရှိဘူးလို့ သဘောရတာပေါ့နော်။ ဒါမျိုးကိုပြန်ခေါ်မယ် ဆိုရင် တကယ်ပဲ နှစ်ဘက်အကြားမှာ အစီအစဉ်တွေ သေချာ ကောင်းကောင်း ရေးဆွဲပြီးတော့မှ ပြန်ပြီးတော့ ခေါ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးလေ။ ခုသူခေါ်တဲ့ ပုံစံက လာပြီးတော့မှ အလင်းဝင်ခိုင်း သလိုလို၊ အမှောင်ထဲပဲ လာဝင်ခိုင်း သလိုလို ဖြစ်တယ်။ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ကို သွားပြီးတော့ အညံ့ခံပေါ့ ဒါမျိုးသွားဖြစ်မှာလေ။ ဆိုတော့ ဒါက ကောင်းသော ကြိုဆိုခေါ်ခြင်း မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ကျမတော့ မြင်တယ်။ အရမ်းကြီး ပေါ့ပျက်ပျက်ဆန်လွန်းတယ်လို့လည်း သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့။”
“အဓိကကတော့ အကြံပြုချင်တာပေါ့နော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့က သူ့ရဲ့အထူး အလေးထား လုပ်ဆောင်ရမှာက အခု ဒီဘက်မှာ ရောက်နေတဲ့လူတွေကို ပြန်လာချင် ပြန်လာလို့ရတယ် မဟုတ်ဘဲနဲ့ လက်ရှိ နယ်စပ် တလျှောက်
မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေ အမြန်ရပ်ဖို့၊ ပြီးတဲ့အခါ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စကားပြောပြီးတော့မှ တကယ့်
နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေပြီးတော့မှ အမြန်ဆုံး နိုင်ငံ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဖြစ်ဖို့၊ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို လျှောက်နိုင်ဖို့ကို သူ့အနေနဲ့ စဉ်းစားပြီးတော့မှ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့မှ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲပြဿနာ၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်း ပြဿနာ ဒါမျိုးတွေ သူက ဦးစားပေး ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ကျမတို့မြင်တယ်။ အဲဒါကို အဓိကအကြံပြုပေးချင်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီနယ်စပ်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ စားရမဲ့မဲ့ နေရမဲ့မဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကနေ လွတ်မြောက်အောင်လည်းပဲ သူ့အနေနဲ့ အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ ကျမတို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။”
“အဓိက အရေးအကြီးဆုံး ပြဿနာကတော့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အဖြေရှာမလဲ ဆိုတဲ့ဟာကို မပြောဘဲနဲ့တော့ အဲဒီလိုမျိုးခေါ်နေရုံ သက်သက်နဲ့တော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ပြဿနာကို ပြေလည်
အောင် ဖြေရှင်းလို့ မနိုင်ဘူး ထင်တယ်လေ။ အခုလက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းပြည် ပြဿနာကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အဖြေရှာချင်တယ်ဆိုရင် အဓိက အရေးအကြီးဆုံး ကတော့ ကျနော်တို့ အားလုံး တောင်းဆို
နေတဲ့ အတိုင်းပေါ့ လက်ရှိပဋိပက္ခမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အင်အားစုအားလုံးနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။”
“နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြန်လာကြပါ၊ လာကြပါလို ဟာမျိုးနဲ့တော့ နိုင်ငံရေး
ုပြဿနာကို အဖြေရှာဖို့မရှိပဲနဲ့တော့ ပြေလည်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အခု ကျနော်တို့လက်ရှိ ဒီလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားမှာလည်းပဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရုံ သက်သက်နဲ့တော့ နိုင်ငံရေး
ပြဿနာကို အဖြေရှာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လို လုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည် ဖော်မလည်းဆိုတာ တိကျတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ပါရမယ်လေ။”
“ထိုနည်းတူစွာပဲ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ဖြစ် ဒီအင်အားစု အားလုံး ပါဝင်ပြီးတော့ တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့ အကျိုးရှိရှိနဲ့ အသုံးချချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်မြင်တာတော့
နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို သွားမလည်း ဆိုတာဟာမျိုး နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် ချပြဖို့ အရေးကြီး
တယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ခေါ်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ
အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့အတွက် သူတို့မှာ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရမယ်၊ လုပ်ငန်းစဉ် ရှိရမယ်။ ဒီအင်အားစု အားလုံးနဲ့ အတူတူ လက်တွဲပြီး တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ် သူတို့မှာ ရှိရမယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ် သူချပြပြီးတော့ ဒါတွေ ဒါတွေ ငါတို့ အကောင်အထည် ဖော်ချင်တယ်၊ ဒါတွေ လုပ်ဖို့ အတွက် အားလုံး တန်းတူ ရည်တူ ဆွေးနွေးပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ အကျိုးရှိမယ့် ကမ်းလှမ်းမှု ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီလို ခေါ်ရုံနဲ့
တော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့တော့ ကျနော့အနေနဲ့ မမြင်ဘူး။”
ဦးသိန်းစိန်မိန့် ခွန်းအပေါ် ကိုမိုးသီးရဲ့ အမြင်များ
နေသစ်- ကိုမိုးသီးခင်ဗျား ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ၈၈ နောက်ပိုင်းတိုင်း ပြည်ကထွက်သွားသူတွေကို ပြန်လာကြပါ။တော်ရုံတန်ရုံအပြစ်ရှိသူတွေကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ ဆိုလာတာတွေရှိတယ်။ သူမိန့် ခွန်းကိုဘယ်လို့ မြင်ပါသလဲ။
မိုးသီး- ဦးသိန်းစိန်က ပြောတာကို ကျနော်တို့ သဘောထားမပြောခင်မှာသမိုင်းကြောင်းတချို့ ကို ပြန်ပြီး ဆွေးနွေးပေးခြင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးကို ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်လက်ထက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တို့ လက်ထက်ကလည်းပြောခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေပြန်လာပါ။ ကိုယ်မိဘအိမ်ကိုကိုယ်ပြန်လာသလိုသဘောထားပါ။ ဒီတချို့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြန်ကြတယ်။ နောက်တော့ ပြန်သွားတဲ့သူတွေဟာ သမိုင်းကွေးတာပေါ့ဗျာ။
၁၉၉၃ ခုနစ်လောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်ထက်ပေါ့။ သူက ကျနော်တို့ ဖက်ကိုအသံပြစ်လိုက်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေပြန်လာပါ။ နိင်ငံတော်နဲ့လက်တွဲပြီး ဒေသဖွင့်ဖြိုးရေး ပူးတွဲလုပ်ကြမယ်။ နိင်ငံရေးကိစ္စတွေကို နောက်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ ပြောပါ။ ကိုယ်နယ်မြေကိုယ်ထိမ်းထား၊ကိုယ်လက်နက်ကိုယ်ကိုင်ထား စသဖြင့်။ ဒီတုံးက ကျနော်က ဒီအေဘီမှာ အတွင်းရေးမှုးတယောက်ပါ။ မလုပ်ပါနဲ့ ။မဖြစ်နိင်သေးပါဘူး အစည်းဝေးမှာကန့် ကွက်တယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း တပ်ပေါင်းစုနဲ့ ပြောပါ။ တတိယနိင်ငံတခုခုမှာပြောပါ စသဖြင့် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရေးမှုတွေက်ုချမှတ်ကြတယ်။ ကာတာဖေါင်ဒေးရှင်းကကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးလာတယ်။
အရင်တုံးကမရဘူးသေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေပဲဆိုပြီး သူတို့ ပါသွားကြတယ်။ ၂၀၁၁ မှာတော့ တော်တော်ပြန်လာကြတယ်။ အလုပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကချင်ကဆိုရင် စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာငြိမ်းချမ်းရေးမရနိင်တော့ဘူး ဖြစ်လာတယ်။
ဒီတော့ ပြန်ပြီး သတ္တုချကြည့်ရင်
၁- ဒေသဖွင့်ဖြိုးရေးလည်းဖြစ်မလာဘူး။ စစ်ပဲပြန်ဖြစ်တယ်။
၂- ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အလုပ်ကြံခံရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန် အထိမ်းသိမ်းခံရတယ်။ ပြန်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဘာဖြစ်လဲ။ တချို့ ပြန်ထွက်ပြေးလာကြတယ်။ အမြီးပြတ်ခံရတဲ့သူတွေ လို ဆက်ဆံခံရတယ်။
အခုတခါ က ဦးသိန်းစိန် က ၈၈ နောက်ပိုင်းပြည်ပနိင်ငံတွေကိုထွက်သွားတဲ့သူတွေပြန်လာကြ။ တိုင်းပြည်ဖွင့်ဖြိုးရေးကိုအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြ။ တော်ရုံတန်ရုံအပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်တယ် လို့ ဆိုတယ်။
အခုကာလ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရစကားပြောနေတဲ့ကာလ ဟုတ်။ ဒီ ကမ်းလှမ်းမှုကရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဟုတ်သလိုလိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဒီကမ်းလှမ်းချက်က ဒေါ်စုကို မသိမသာနဲ့အဆင့်နိမ့်ချမှု ( Down-Grade ) လိုက်တာ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ စစ်အစိုးရစကားပြောနေတာကို နောက်ကစားသမား ( Player) တခုကိုထည့်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကလည်း ဒေါ်စုနဲ့ သဘောတူညီထားတဲ့ ၄ ချက်ထက် ဈေးပိုပေးထားတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ဒေါ်စုနဲ့ ရထားတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုကြည့်ရင် နိင်ငံတော်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ရမယ်။ ဆူဆူပူပူမလုပ်ရဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီး ၈၈ နောက်ပိုင်းပြည်ပကိုထွက်သူတွေကြတော့ ပြန်လာကြ။ တော်ရုံတန်ရုံအပြစ် ( လူသတ်မှုတို့ ဘာတို့ ) ဆိုရင်ခွင့်လွတ်မယ်။ အဓိပါယ်က ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တောင်မထားဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်မြင်တာက ဒီကွာဟမှုကိုမြင်နေတယ်။
နောက်တချက်က စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု အခြေ ( Resume ) ကိုကြည့်ရအောင်
၁- ၁၉၉၀ – ဒေါ်စု ကိုဖမ်းတဲ့အချိန် – မနပုလောကိုထိုးစစ်အလုံးအရင်းလုပ်တယ်။
၂- ၁၉၉၅ – မနပုလောကျသွားတဲ့အချိန် ( ကျနော်စိတ်ထင် ၁ လခန့် ) ဒေါ်စုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လွတ်တယ်။
၃- ၁၉၉၆-တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အချိန် သဘောတူညီမှုတွေရသွားတဲ့ ဒေါ်စုကိုပြန်ဖမ်းပြီးထည့်တယ်။
၄- ၂၀၀၄ ခုနစ် မင်းကိုနိင်တို့ ကိုလွတ် ဒေါ်စုကိုဖမ်း
၅- ၂၀၁၀- ခုနစ် မင်းကိုနိင်တို့ ကိုဖမ်း ပြီး နောက် ဒေါ်စုကိုပြန်လွတ်
၆- ၂၀၁၁- ဒေါ်စုကိုလွတ်ပြီးနောက် ကချင်၊ကရင်နဲ့ ရှမ်းကို စစ်ဆင်ရေးလုပ် ။
၇- ၂၀၁၁- ဒေါ်စုနဲ့ ပြော၊ မင်းကိုနိင်တို့ ကိုဖမ်း၊တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖမ်း၊ ၈၈ ပြည်ပတွေကို ကမ်းလှမ်း။
စသဖြင့် ဦးအောင်ဇေယျ ရဲ့ မုဆိုးဘိုရွာ တည်ထောင်တုံးကစ က နည်းလမ်းဟောင်းကိုပဲထိထိရောက်ရောက်သုံးနေတာကိုတွေ့ နေရတုံးဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တဖက်ကို တိုက်နေချိန်မှာတဖက်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအလံထောင်ပြတာကို လူတွေသံသယရှိနေကြပါတယ်။ သံသယတွေကင်းအောင်လုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းခြင်တယ်။
နေသစ်- ဒီတော့ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ လူတွေကသံသယတွေကင်းနိင်မလဲ ။
မိုးသီး- မင်းကိုနိင်နဲ့၈၈ မျိုးဆက်တွေ နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုလုပ်နေတဲ့ ထိုးစစ်တွေကိုရပ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒါကသဘောရိုးနဲ့ပြောတာပါ။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာသိပ်ကိုဒုက္ခရောက်နေပြီ။ အားလုံးစုပေါင်းညီညွတ်မှုနဲ့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အချိန်ကြနေပြီ။ သဘောထားရိုးပါလို့ တိုက်တွန်းခြင်တယ်။ ဦးနုပြောတဲ့သပုန်းချေရေးမှုကို ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ အလေးအနက်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။
မင်းကိုနိင်နဲ့၈၈မျိုးဆက်တွေကိုအနည်းဆုံးတော့ရန်ကုန်ကို ပြန်ခေါ်ပါ။ တနေရာမှာဆုံတွေ့ ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ ဟာအစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်နိင်ဖို့ဆန္ဒရှိသူတွေပါ။ သူတို့ ဟာ အကြောင်းမဲဆူပူမှုလုပ်မဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေပါ။
နေသစ်- ဦးသိန်းစိန်က ဒီလိုကြေညာမှုတွေလုပ်လာတာက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်ထက်တုံးကလိုပဲ
သူဟာ တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို တဲ့ဆန္ဒရောမရှိနိင်ဘူးလား။ ကျနော်တို့ လေ့လာရသလောက်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လက်ထက်တုံးကလဲ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ ဆုံဖို့ ကမ်းလှမ်းဖို့ ဆန္ဒတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တပ်ထဲက အမာလိုင်းတွေကိုသူမကျော်နိင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်လို့ လေ့လာမိတယ်။ ခင်ဗျားဘယ်လို့ သဘောထားသလဲ
အစိုးရထဲမှာ ကျနော်တို့ လေ့လာမိရသလောက် အုပ်စုနစ်ခုအားပြိုင်မှုတော့တော့ကိုကြီးနေပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးရွေမန်း၊ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့အုပ်စု၊ နောက်သူတို့ ဖက်ကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က ကူးပြောင်းလာတယ်။ ပိုပြီးနီးစပ်လာတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ပေါ်လစီပိုင်းဆိုင်ရာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတယ်။
၁-ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာဆည်တည်ဆောက်တဲ့ကိစ္စ၊ ဦးသိန်းစိန်က သဘောမတူခြင်ဘူး။ ဦးတင်အောင့်ဦး ဦးဆောင်တဲ့လေးဦးဂိုဏ်းကို စိတ်ကုန်နေတယ်။ စိတ်ပျက်နေတယ်။ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။
၂- ဦးသိန်းစိန်က ဗဟိုဘဏ်ကို ဘဏ်ဌာရေ၀န်ကြီးဌာနအောက်ခွဲထုတ်ခြင်တယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ အင်စတီကျူးရှင်းတခုလို ထားခြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်အောင်မြင့်ဦးက လက်မခံခြင်ဘူး။
၃- သတင်းစာတွေမှာ ကျော်ဆန်းရေးတဲ့သတင်းစာဆောင်းပါးတွေကိုမကြိုက်ဘူး ။ အစိုးရအာဘော်တွေလိုထင်မှာစိုးတယ်။လူထုအညိုအညင်ခံနေရတာကိုစိတ်ပျက်နေတယ်။
၄- အစိုးရအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကာလုံကပြန်ပြင်နေတာတွေကို ဦးသိန်းစိန်ကသည်းမခံနိင်တော့ပဲ လေးဦးဂိုဏ်းကိုပိုဆန်ကျင်လာတော့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေကပါအားတက်လာကြတယ်။ အစိုးရအဖွဲ အတွင်းဦးသိန်းစိန်ကိုပိုပြီါ်ဝိုင်းရံလာတယ်။
၅- ဦးသန်းရွှေရဲ့ အခန်းကဏ ဒါကကျနော်ယူဆချက်ပါ။ သူကသူမိသားစုလုံခြုံရေးကလွဲလို တိုင်းပြည်နေစဉ်ကိစ္စတွေကိုစိတ်မ၀င်စားတော့ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ တင်အောင်မြင့်ဦးဂိုဏ်းကိုသိပ်ပြီး ကျောထောက်နောက်ခံမပြုတော့ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။
၆- ဒါကြောင့် ဒီ၃ ပတ်လောက်မှာ တင်အောင်မြင့်ဦးရဲ့၎ ဦးဂိုဏ်းက အားပျော့လာတာတွေ့ ရတယ်။
နေသစ်- ဒီတော့ ကျနော်တို့ရဲ ဗျူဟာကဘာဖြစ်သင့်လဲ
မိုးသီး- ဦးသိန်းစိန် ကိုတကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်တယ်။ ဒေါ်စု၊မင်းကိုနိင်တို့ နဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည်လက်တွဲလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းသင့်တယ်။ တယောက်ကိုဖမ်း၊တယောက်ကိုလွတ်၊ တဖွဲ့ ကိုတိုက်တဖွဲ့ ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်း ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့နည်း ( divide and rule)
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပြစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းသင့်တယ်။ သူဒါတွေလုပ်နိင်ရင်သူဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိင်ငံက ဗိုလ်ခှုပ်ကြီး ရားမိုစ်လို ဖြစ်လာမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် တုံးက ဒီလိုအခွင့်အရေးတကြိမ်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူအဖွဲ့ နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ရက်ရက်စက်စက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကာကွယ်မပေးခဲ့ဘူး။ သူတို့ ရဲ့ အင်အားတခုလို့ မသတ်မှတ်ခဲ့ဘူး။ အချိန်ဆွဲလွန်းတယ်။ နောက်တခုက ကိုယ်ကျိုးတွေပါခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သူပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။အချိန်နှောင်းသွားတယ်။
သမ္မတ ကတော့ နယ်ပယ် ပေါင်း စုံ တော်တော် များများ ကို ခေါ်တွေ့ နေတာ ပဲ။17 August, 2011 မနေ့ က လဲ ကွန်ပြူတာ အသင်း အကြီးအကဲ ၁၀ ဦး ကို ခေါ် တွေ့ တယ် လို့ ခိုင်လုံ တဲ့ သတင်း ရပ် က ပြောတယ်။
လက်နှိပ်စက်နဲ့တီဗွီ တွဲသုံးရင် မြန်မာပြည်လုပ် ကွန်ပြူတာဖြစ်နိုင်မလား သိချင်လို့ဖြစ်မှာပါကွယ်…။
အရင်သူတို့လုပ်တဲ့ နည်းတွေဘဲ ပုံစံပြောင်းသွားတာ
အစကတည်းကလည်း ပြည်ပရောက်တဲ့သူတွေက နိုင်ငံရေးသိပ်မလုပ်တော့ဘဲ
ရွှေမျိုး မောင်နှမ ပြန်ခေါ်ဘို့လောက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတာ
ဒီမှာ ဒီကောင်တွေ ဝါဒဖြန့်ဘို့ ဆင်ထားပြီးလောက်ပြီ ပြောစရာဖြစ်လာမှာ
ကြည့်ပါလား ဒီလူတွေ ပြည်ပထွက်သွားပြီး တစ်ကယ် နိုင်ငံကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဘူးဆိုပြီးတော့
နိုင်ငံကို မချစ်လို့လား ဘာလားဆိုလား ဒီပို့စ်မျိုးတွေက အရင်သွေးတိုးစမ်းနေတဲ့ သဘောတွေရှိတယ်
နိုင်ငံအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်ကြမယ့် အသက်အရွယ်ကောင်းတွေကို ထောင်ထဲပို့ ရိုက်ချိုး၊နိုင်ငံရေးသမိုင်းနောက်ခံရှိကြတဲ့ မိသားစုတွေအပေါ် ဖိနှိပ်နေတဲ့ ဒီစစ်အာဏာရှင်လက်ဝေခံ အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဘာတွေများ မျက်လှည့်ပြမလဲ စောင့်ကြည့်ကြရပါမယ်။တကယ် တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးပြန်လာကြမှာပါ။သိန်းစိန်ရေ ခင်များကြီးကခေါ်နေစရာတောင် မလိုပါဘူး။တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ စစ်သားက စစ်သားနေရာမနေနိုင်ဘဲ လူနေရာခွေးဝင်ထိုင်နေသလို နဲ့ တဂိန်ဂိန်ဟောင်မနေစမ်းပါနဲ့ 
ရိုးရိုးသားသား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဆိုရင်တော့ ကြိုဆိုပါတယ်..။
နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနဲ့လည်း စုံညီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်…။
လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီး ကောင်းတဲ့ရေခံမြေခံပတ်ဝန်းကျင် ခင်းကျင်းပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်….။
တစ်ခုသတိပြုရမှာက ၁၉၆၂ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်ခါစ တောခိုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတာ ရှိပါတယ်..။
နောက်တော့ ဆွေးနွေးပွဲမအောင်မြင်ဘူးဆိုပြီး တောခိုအဖွဲ့တွေ တောတွင်းကိုပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်…။
မြေပေါ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအောင်မြင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ လူတွေ (စာရေးဆရာ မြသန်းတင့်တို့၊ ဒဂုန်တာရာတို့၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးတို့အပါအ၀င် ၃၀၀၀ခန့်)ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းပြီး တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို အပြည့်အ၀ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်…။
ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ Transparency, Trustworthy စကားလုံးများကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်…။
ပစ္စည်းသိမ်း..ဖမ်းထောင်ချ..လုပ်ချင်တာတွေလုပ်ပြီး..နှင်ထုတ်ခံရသူတွေ..ထွက်ပြေးကြရတဲ့တွေ.. မြန်မာပြည်ကနေ.. ထွက်သွားလိုက်တဲ့သူတွေ.. မနည်းမနောပါပဲ… အဲဒီလူတွေ..အဲဒီခေတ်တွေတုံးက မြန်မာပြည်ပြန်လို့မရဘူး..။
၈၈နောက်ပိုင်း.. န၀တလက်ထက်မှာ..ယူအက်စ်နေ..မြန်မာသံအမတ်က.. မြို့ တွေလှည့်ပြီး..ပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုတာ.. လိုက်ပြောတယ်..ကြားဖူးတယ်..။
အဲဒါနဲ့.. အခုပြန်နေတဲ့.. အမေရိကန်-မြန်မာ တိုးရစ်တွေ.. ပေါပေါများများတွေ့ကြရတာပေါ့..။
အခုကိစ္စမှာလည်း.. သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောပြီးနောက်မှတော့.. သမ္မတစကားဟာ..အဲဒီအစိုးရရဲ့..ပေါ်လစီဖြစ်တာမို့.. (သဘောရိုးတယ်ဆိုရင်.). ဆိုင်ရာနိုင်ငံအခြေစိုက်..မြန်မာသံရုံးတွေက.. ပြန်ချင်သူတွေကို.. တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ပြီး.. ညှိကြဖို့ကောင်းတယ်ထင်မိတယ်..။ အာမခံချက်တွေလည်း ပေးရမှာပေါ့..။
အများအားဖြင့်.. ပြည်ပနေအတိုက်အခံတွေထဲက.. နိုင်ငံရေးပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်ရှိသူတွေ.. မြန်မာပြည်ချစ်သူတွေ.. ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာ.. နိုင်ငံသားမယူထားဘူးထင်မိတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. အမြဲနေခွင့်(ဂရင်းကဒ်)ပဲ သက်တန်းတိုးရင်း.. နိုင်ငံသားမလျှောက်ပဲနေသူတွေအများကြီး..။
မှတ်မှတ်ရရ.. အပေါ်က.လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့…လားရှိုးသိန်းအောင်လည်း.. အနှစ်၃၀မကနေပေမဲ့.. အမေရိကန်နိုင်ငံသားမခံယူထားဘူး.။
သာမန်..စီးပွားရေးသမား..ပညာရှင်.. ငွေရှင်တွေက..ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေရဲ့.. နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေကြတာများမယ်.။
သူတို့က.. မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး.. တစ်ကပြန်စဖို့.. တော်တော်မလွယ်ဘူး..။
သူတို့ကို.. တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ချင်တယ်.. အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်.. ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုပေးမှာလည်း..။
သူတို့ပြန်လာရင်.. မြန်မာပြည်ကနေ.. ပညာအတွေ့အကြုံတင်မဟုတ်..။ ငွေအရင်းအမြစ်တွေပါ ရမှာဖြစ်လို့ပါ.။
ယူအက်စ်ရဲ့..ဆန်ရှင်မှာ.. သူ့နိုင်ငံသားတွေကို.. မြန်မာပြည်နဲ့..စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပေးမထားဘူး..။
ဒီအတိုင်းပုံမှန်..ဒေါ်စုနဲ့ဆွေးနွေး.။ ရောက်လာမဲ့..ယူအက်စ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တွေကို..အာမခံချက်ကတိပေး..ကတိအတိုင်းလုပ်..။ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေကို..လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး.စသဖြင့်.. လုပ်သွားရမှာပဲ..။
အမေရိကန်တွေနဲ့..အလုပ်လုပ်တာများလာမှာနဲ့အမျှ.. မြန်မာပြည်က..အမေရိကသံရုံးကိုလည်း.. သံအမတ်အဆင့်ထိမြှင့်ပေးဖို့.. မြန်မာအစိုးရကတောင်းဆိုရမှာလည်း..တခုပေါ့..။
ဒါတွေတောက်လျှောက်လုပ်သွားရင်.. နောက်နှစ်ဆို.. ဆန်ရှင်လျှော့ချပေးမယ် ထင်မိတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကြေငြာချက်က.. ပထမဆုံးအဆင့်..လုပ်ကိုလုပ်ရမှာတခုဖြစ်တယ်ထင်ပါကြောင်း…။
နိုင်ငံသားခံယူထားပြိးထားသူတွေ.. သူပုန်ဟောင်းတွေ.. ပြောင်းခိုသူတွေ.. ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ.. စသဖြင့်..အပိုင်းတွေခွဲပြီး.. ဆွေးနွေးကြည့်လိုပါကြောင်း..။
အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တာက လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပဒေ (သို့) အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ဥပဒေလိုမျိုး အတည်ပြုပြီး တိုင်းပြည်ပြန်လာသူများကို အပြည့်အ၀ အာမခံချက်ပေးသင့်ပါတယ်။
လက်ရှိ သမတတာဝန်ယူထားသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ပါးစပ်ကကြားကောင်းအောင်ပြောခြင်းထက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြနိုင်ပါစေ…။
လွန်ခဲ့တဲ့..တနှစ်ကျော်က.. မှတ်ချက်ကော်မန့်လေးပြန်ဖတ်ရင်း.. ဂျင်မီဂျက်..အမေ့အိမ်အပြန်သတင်းလေး..တင်လိုက်ကြောင်း.. :528:
လားရှိုသိန်းအောင်၏ အမေ့အိမ် အပြန်ခရီး
လားရှိုး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄။
ယနေ့ မွန်းလွဲ (၃)နာရီခန့်က နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် လားရှိုးသိန်းအောင်သည် ၎င်း၏ မိခင်ကြီး နေထိုင်ရာ လာရှိုးမြို့ ရပ်ကွက်(၂) နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားများပြောသလို နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးမှ သူတို့ ပြန်လာဖို့ ကောင်းမှာပါ…. နို့မို့ သူတို့လက်ထဲကို ရောက်သွားကြမှာပေါ့
နိုင်ငံသားခံပြီးသူ..ဥပမာ..အမေရိကစစ်ဒဇင်ဖြစ်ပြီးသူကို..မြန်မာသံရုံးက ပြန်ဖို့ဗီဇာထုတ်ပေးပြီး.. ပြန်တယ်ဆိုပါစို့..
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုံးက.. ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်ဖြစ်နေတဲ့.. ကိုညီညီအောင်ပြန်တော့..ဖမ်းလိုက်ပေမဲ့….. အမေရိကအစိုးရရဲ့..ဖိအားကြောင့် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိတာကိုး..။
အခုလို..တရားဝင် သမ္မတကပြောပြီးနောက်မှ.. အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့…. ပြန်လာသူကိုတော့ .. တခုခုလုပ်ဖို့ပိုခက်ပါလိမ့်မယ်..။
တခေါက်၂ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြီး.. အဆင်ပြေနိုင်တယ်သေချာမှ.. အပြီးပြန်လို့လည်း ရမယ်လို့ထင်တာပါပဲ..။
ပြန်ပြီး.. ထောင်ကျနေတဲ့..မိတ်ဆွေတွေကို.. ထောင်ဝင်စာသွားတွေရင်း..စကားပြောကြည့်..အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့.. စကားပြောကြည့်တာတွေ..လုပ်နိုင်တာပေါ့..။
အမှန်တော့ ဘယ်နိုင်ငံသားခံယူထားလို့ သူကတော့ မျိုးမချစ်၊ မျိုးမစစ်တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ အတော်လေးခေတ်အောက်သွားပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွင်းမွေးဖွားသူ ဘယ်သူမဆိုဟာ ဥပဒေပြဌာန်းစရာမလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားအလိုအလျာက်ဖြစ်ပြီးသားပါ။ အခြေခံဥပဒေကသာ ဒါကိုအတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ရတာပါ။ အလိုအလျောက်ဖြစ်တဲ့ မွေးရာပါ ခံစားခွင့်ဖြစ်သလို၊ ဘယ်သူကမှ လာပြီး ရုတ်သိမ်းလို့မရပါဘူး။ ဗျိုင်းကိုကျီးလို့ စွတ်စွဲလို့မရသလိုပါဘဲ။
စိတ်ထားသေးသိမ်တဲ့ မနာလိုစိတ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အသိတရားထဲက ထုတ်နိုင်ကြဘို့လိုပါတယ်။
ပထမဆုံး ပြန်လာသူဆယ်ဦးကို သိန်းတစ်ထောင်စီ၊ကားပါမစ်၊ဆဲလ်ဖုန်း ချပေမတဲ့.
စိတ်ချို့ ယွသင်းမှု..ရောဂါ ဘာညာ ပါလာမှာဆိုးလို့ တော့ အနဲဆုံး ခြောက်လ ပြင်ပနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်နေရမယ်ဆိုဘဲ..ဗျာ
အမယ်လေး ဆရာခိုင်ရယ်…တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နှိုးသူများ ဆိုလို့အားရ၀မ်းသာနဲ့ဖတ်လိုက်တာ၊ငါတို့ သူကြီးကိုခိုင် လည်းမပါဘူး၊
ကျနော်က သတင်းရလို့တင်ပေးတာနော်တဲ့….ဟဲဟဲ…မကြောက်ပါနဲ့သူကြီးရယ် သူကြီးပြန်လာရင် သမတကြီးက နေပြည်တော်မှာ ညစာနဲ့ဧည့်ခံအုံးမှာပါ။
၁။ ပြည်တွင်းမှာ လူမှုရေးလုပ်နေကြတဲ. INGO, LNGO နဲ. တစ်ခြား လူမှုရေးအဖွဲ. ၊ ပရဟိတအဖွဲ.လေးတွေကိုတောင် သူတို.လွတ်လပ်ခွင်.မပေးပဲ ချူပ်ကိုင်ထားကြတယ်။ (ပြည်သူပြည်သားကောင်းဖို. လုပ်နေတာလေးတွေကိုတောင် စောင်.ကြည်.နေတယ်)
၂။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွတ်မပေးသေးဘူး၊။( ဖြစ်နိုင်ရင် ထောင်သက်ပါတိုးချင်နေကြတာ)
၃။ ရှိတဲ. ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလဲ ထောင်ထဲထည်.ဖို. ၀န်မလေးဆဲပါ။ (နိုင်ငံရေးလုပ်လို. ဖမ်းတာ ကျနော်တို. တစ်နိုင်ငံတည်းလို.လို.တွေးမိတယ်)
ဒါကြောင်. သူတို.ပြောတဲ.စကားတွေကို ကြိုဆိုပေမယ် သံသယဖြစ်စရာအကြောင်းတွေချည်းလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက အထဲက နိုင်ငံရေးအုပ်စုကိုစောင်ကြည်.ပြီး လုပ်သမျကို နှိမ်ထားနိုင်ပြီဆိုတော. အပြင်ကလူတွေကိုပါ မျက်စိအောက်မှာထားပြီး စောင်.ကြည်.ထောင်ချချင်ပုံရပါတယ်။ လောလောဆယ် အစလေးမှာတောင် ကောင်းမလာသေးပဲနဲ. အနှောင်းသေချာဖို.ကတော. ဝေး..ဝေး..ဝေး…ဝေ.းးး
ဝေးလို့ နေမှာပါ။လိမ်ညာနေတဲ့ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒီ အစစ်တွေရဲ့ စကားကို စောင့်ကြည့်ကြပါဦး။ကိုယ့်ဝမ်းကို မနိုင်ဘဲ ပဲဟင်းနဲ့ ပဒိုင်းသီးစားကြည့်နေတာကို ကျွန်မတို့ ကပွဲကြည့်ပရိသတ်လုပ်လိုက်ရအောင်။
ဦးသိန်းစိန်က ဘယ်သူတွေကို အဓိက ဖိတ်ခေါ်တာလဲ ဆိုတာလဲ ရှိပါသေးတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်တော့ ယုံနိုင် လက်ခံနိုင်ဘို့ လိုပါသေးတယ်။
စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဆိုရင်လဲ ဘယ်သူက ဘာလာလုပ်ရမှာလဲနော်…။
အခြားနိုင်ငံသားခံယူလိုက်သူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုမချစ်လို့ လို့လဲပြောလို့မရပါဘူး။ မပြန်ချင်တော့လို့ ပဲဖြစ်မှာပါ။
အခြားနိုင်ငံသားမခံယူပဲနေသူတွေကတော့ တနေ့ ပြန်လာမယ်လို့ စိတ်ကူးထားလို့ ဖြစ်မှာပါ။
တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဖြင့် အပြင်ကလဲ ချစ်လို့ရပါတယ်။ အပြင်မှာနေပြီးတော့လဲ မြန်မာပြည်အတွက် မြန်မာလူမျိုး(တိုင်းရင်းသားအားလုံး)အတွက် အကျိုးရှိအောင် အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ အပြင်ကနေမှ ပိုပြီးထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
တကယ်ရော ပြန်လာကြစေချင်တာ ဟုတ်လို့လား။ တကယ်ရော ပြန်လာကြမယ်လို့ ထင်ထားလို့လား။
သူတို့က သိပ်မတော်ရင်တောင် ကိုယ်ညံ့စေချင်သလောက်တော့လဲ မညံ့ပြန်ဘူး။
တကယ်ရော ပြန်လာကြစေချင်တာ ဟုတ်လို့လား။
တကယ်ရော ပြန်လာကြမယ်လို့ ထင်ထားလို့လား။
သူတို့က သိပ်မတော်ရင်တောင် “ကိုယ်ညံ့စေချင်သလောက်တော့လဲ မညံ့ပြန်ဘူး”
ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် က ကိုယ်သားသမီးလိုသဘေား ထားတယ်
ပြန်လာခဲ့ကြပါဆိုလို ပြန်သွားမိတဲ့ ၈၈ တုံးက ကျောင်းသားတွေပါ။
ခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်လည်း အသတ်ခံရ ၊
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လည်း အဖမ်းခံရ၊
ပြန်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေ ထဲ လည်းမြောင်းထဲရောက်ပေါ့။
လက်နက်ကိုင်နယ်စပ်ကိုရောက်ပြီးမှာ ပြန်သွားတဲ့သူတွေထဲမှာ မင်းသား သီဟတင်စိုး နဲ့ထူးအိမ်သင် (ခ) ကိုငှက်ကြီးတောင် ပါသွားခဲ့တယ်။
သီဟတင်စိုးက အရင်က ဗကသ က ။
တော်လှန်ရေးကိုဆန်ကျင်တဲ့ ၀ါဒဖြန့် ချီရေးကားတွေ ကို အတော်မသတ်တောင်ရိုက်လိုက်သေးတယ်။
ထူးအိမ်သင်ကတော့ ဧရာဝတီလို သီချင်း နဲ့တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက် ပြန်လည် အလုပ်အကြွေးပြုခဲ့တယ်။
ယူအက်စ်က.. ၈၈ မျိုးဆက်တယောက်ရဲ့စာပါ..။ သိရန်တင်ပေးတာဖြစ်ပါကြောင်း.
NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥဏ်ဝင်းက ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြည်ပရောက် ၁၉၈၈ မျိုးဆက်များနှင့်မြန်မာ့ ပညာရှင်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီထူထောင်ကြဖို့ ပြောဆိုချက်ကို ဦးဥဏ်ဝင်းက ထောက်ခံပြောဆိုထားတာကို BBC နဲ့ မေးမြန်းခံမှာနားထောင်လိုက်ရတော့ ကျုပ်ကဒီလို ကောက်ချက်ချမိတယ်။ ဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့သဘောထားဖြစ်ဖို့ ဆိုတာထက် ဒေါ်စုနဲ့ဦးအောင်ကြည်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲတွေထဲက ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာလို့ ကျုပ်ကယုံကြည်တယ်။ အယ်ဒီလိုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက် ၂ဖက်စလုံးက အကောင်းဖက်ကို ရည်ရွယ်ပြီ စတင်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လာတာလို့ ယူဆဖွဲရာရှိတယ်။
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ် ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာမှာ NLD ရော ဦးသိန်းစိန်တို့ဖက်ရော ပြည်သူတွေဖက်ရော အားလုံးလုပ်ဆောင်ကြရမှာက တဖက်နဲ့တဖက် ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ ယုံကြည်မူရအောင် အပြန်အလံတဆင့်ပြီတဆင့် တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်တယ် ထိုကြောင့်ယ္ခုလို ၂ဖက်စလုံးက တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူ ကောင်းကျိုးကိုဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လာတဲ့ အပြုမူမှန်သမျှကို ယဉ်ကျေးတဲ့ လူဘောင်အသိုင်းဝန်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ မည်သူမဆို ယ္ခုသူတို့တွေရဲ့ အပြန်အလံ အပြုသဘောဆောင်မူမှန်သမျှကို ကြိုဆိုထောက်ခံရမယ်။
ဦးသိန်းစိန်တို့ကို ကျုပ်နဲ့ကျုပ်ပတ်သက်နေတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝန်းက ခင်ဗျတို့လုပ်တာတွေဟာ တကဲ့စေတနာအမှန်နဲ့ လုပ်နေတာပါဆိုတာကို အများသူငါသိအောင် ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်ဖို့တော့ လိုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ ထောက်ပြပြောဆိုလိုတယ်။ ထိုသို့အဆက်မပြတ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်သူသားတွေသာမက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေရဲ့ မေတ္တာတရားတွေဟာ သူတောင်းစားလို မည်သူစီမှ ယ္ခုလိုတောင်းဖို့မလိုပဲ သိမ်းဆီးထားစရာမရှိအောင် ခင်ဗျတို့ဆီကို ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။
ယ္ခုအခွင့်အရေးဟာ မြန်မာ့ရေးကို ထိရောက်စွာပိုမို၍ လုပ်လိုသူတွေအတွက် အခွင့်အရေးတရပ် ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် ပြည်ပမှာနိင်ငံရေးခိုလှူံခွင့် လိမ်လျှောက်သူတွေနဲ့ ထောက်ခံစာလုပ် ရောင်းစားသူတွေကတော့ ကျုပ်မြင်သလို မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုနည်း၎င်း ပြည်ပမှာ မြန်မာပြည်က မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးကို ပြစားနေတဲ့ အသေးစား အကြီးစား စီမံကိန်းလုပ်စား နေသူတွေအတွက် အမှန်တကယ် ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို လိမ်မရတော့ပဲ မှန်မှန်ကန်ကန်ကူညီရဖို့ အခွင့်အရေးတရပ်ရသွားပြီ ပြည်ပမှာဆက်ပြီလီမ်စားဖို့ အခွင့်အရေးဆက်လိုနေရင်တော့ ဟိုအကျင်းသားလွတ်ပေး ဒီလိုလုပ်ပေး ဟိုလိုလုပ်ပေးလို့ စင်ခြေစင်လက်တွေပေးပြီ အပြုသဘောဆောင်ဝါဒကို ဆန့်ကျင့်ကြမှာကတော့ ရှိမှာပါ ဒါပေမဲ့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥဏ်ဝင်း ပြောသလိုတယောက်ချင်းဆီ ဆုံးဖျက်ရမှာဖြစ်တယ်။
ကျုပ်တစ်ခုပဲ ဦးသိန်းစိန်ကို လုပ်ခိုင်းချင်တာကတော့ ၁၉၈၈က ထွက်လာသူတွေ ပြန်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အထဲမှာ ပြစ်မူကျူးလွန်သူတွေကို ပြစ်ဒါဏ်လျှော့ပေးမယ်လို့ဆိုထားတော့ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လိုပြစ်မူနဲ့ ပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်ထားဆိုတာ လူနံမည်နဲ့ ကျူးလွန်ထားတဲ့ ပြစ်မူတွေကို ကျေညာပေးဖို့လိုတယ်၊
အပြစ်ရှိရင်လဲ မည်သည့် တရားရုံးတော်က တာဝန်ယူ စစ်ဆေးမှာလဲ?
လွတ်လပ်တဲ့ တရားခွင်းကို တည်ဆောက်ပေးမှာလား?
Interesting comments to consider,
သမ္မတကြီးက ပြစ်မှုကျုးလွန်ထားတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံမှုတွေတော့ ရှိမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာဖို့ ကြိုဆိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်ပကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထဲမှာ ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်နဲ့ သွားရောက်ခဲ့ကြသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ အပြစ်မရှိနိုင်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ သမ္မတကြီး ပြောသလို ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်နေပါတယ်’
စာရေးဆရာမ သန်းမြင့်အောင် (နာရေးကူညီမှုအသင်း-ရန်ကုန်)
ပြစ်မှုဆိုတာမှာ ရှင်းဘို့လိုပါတယ်။ ကင်မရာကိုင်ရင်လည်း ပြစ်မှု၊ email လေးတစ်စောင်ပို့ရင်လည်း ပြစ်မှုဆိုတာမျိုးတွေ မဖြစ်ဖို့လိုတာတော့ အမှန်ပါ။
( ပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ) ဟဟဟား………….Gmail သုံးရင်တောင် အီလက်ထရောနစ် ဥပဒေ နဲ့ ငြိတယ်
မဲသူခိုးအစိုးရကို ပုခုံထမ်း ချီးမြှောက်ပေးမယ့် သူတွေကို ပြန်ခေါ်နေချိန်မှာ
သူတို့ ပြောတဲ့ စကား ဘယ်တုံး ကများ ၁၀၀% တည်ခဲ့ လို့လဲ….၈၈ အပြီး ကျောင်းသား တြွေပန်လာ နိုင်ပြီ ဆိုတုံးကလဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်း ပွဲလေး လုပ်ပြီး စစ်ကြောရေး စခန်း တန်းပို့လို့ သေတဲ့ သူတွေလဲ သေကုန် ကြတာ မမေ့ကြ ပါနဲ့ လို့ဘဲ ပြောပါရစေ
ဘာအရင်လုပ်ရမယ် ဆိုတာ သိရဲ့ သားနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီး အဝေးက လူကို ကြားကောင်းအောင် ပြောနေတာ ခေါ်နေတာတွေဟာ.. သူတိုမလာမယ် မှန်း သိလို့လုပ်နေတယ် လို့ ပဲ ယူစပါတယ်…
ပြည်ပရောက်နေသူတွေ ပြန်လာချင်စေလောက်တဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့စီးပွားရေးအခင်းကျင်းတွေ
ဇေယျာသော်တောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် သီချင်းဆိုခွင့်မရှိသေးတာ ဘာကိုများအကြီးအကျယ် မျှော်လင့်မိတာပါလိမ့်။
အညွန်းတွေပဲ သိပ်မဖတ်ပဲနဲ့လက်တွေ့ပဲလုပ်ကြပါဗျာ။ အခုကအညွန်းဖတ်တာနဲ့တင် ဝမ်းက၃ခါလောက်သွားနေပြီ။
တစ်ဖက်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် တစ်ဖက်ကို မဟာမိတ်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မဟာမိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူနဲ့သာ ထာဝရမဟာမိတ်လုပ်တာဟာ အလုံခြုံဆုံးလို့ သမ္မတကြီးကို အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အချိန်မဆိုင်းပဲ မြန်မြန် လုပ်စေချင်ပါတယ် သမ္မတကြီးခင်ဗျာ။ မလုပ်နိုင်ခင် အနှောက်အယှက် ကြုံမှာ သိပ်ကြောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကံဆိုးတတ်လွန်းလို့ပါ။
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ကတိတွေတည်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သမ္မတကြီးဟာ ကျောင်းသား တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အရင်က ထားရှိခဲ့တဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
သမ္မတကြီးနဲ့ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ တွေ့လည်းမတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစု အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အဖေက သမ္မတကြီးကို အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဖူးပါတယ်။ ၁၉၈၈ အောက်တိုဘာလမှာ အိန္ဒိယနယ်စပ်ကို လက်နက်ကိုင်ဖို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ညီ ဆေးကျောင်းသားအပါအ၀င် မန္တလေးကကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အများအပြားကို သမ္မတကြီးတပ်ရင်းမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့တပ်က ကလေးမြို့အနီးတောထဲမှာ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သမ္မတကြီးဟာ စိတ်နှလုံးသားကောင်းစွာနဲ့ ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို ဘာတစ်ခုမှမဖြစ်စေဘဲ ကျွန်တော့်အဖေလက်ထဲကို အပ်နှံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖေကိုလည်း လေးလေးစားစားပဲဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဒီစိတ်နှလုံးသားနဲ့ ၈၈ ကလူတွေအားလုံးကို ပြန်လာဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ တစ်ကယ်စိတ်နှလုံးသား ကောင်းမွန်စွာနဲ့ဆိုရင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ၈၈ အုပ်စုကို လွှတ်ပေးပါ။ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူ၊ တကယ်အနစ်နာခံခဲ့သူတွေပါ။
သမ္မတကြီးလို စိတ် နှလုံးရှိတဲ့သူတို့လိုလူတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သမ္မတကြီးကျန်းမာပါစေ။
အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဘက်ကိုဘဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြပါအုံး..။ ဒါမှ ပြည်ပရောက်ပညာရှင်တွေက ပြန်လာဖို. စဉ်းစားမှာ..။
– မီးပုံမှန် ပြန်လာမဲ့အချိန်
– အင်တာနက်ကို ယူကျူ.အစရှိသည်များကို မပိတ်ပင်တော့တဲ့ အချိန်
– လမ်းတွေ ပြန်ကောင်းမဲ့အချိန်
– ညဘက်အိပ်ရေးပျက်အောင် ဧည့်စာရင်း မစစ်တော့မယ့်အချိန်
– ကိုယ့်သားသမီးတွေကို လယ်တောထဲမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်း သွားတက်ခိုင်းစရာ မလိုတော့တဲ့အချိန်
– ဆေးရုံမှာ ပတ်တီး၊ ဂွမ်း စသည်များကို စရိတ်သက်သာစွာနဲ. အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မဲ့အချိန်
– အတင်းအကျပ်၊ မထည့်မနေရ အလှူခံ မကောက်တော့မယ့် အချိန်
– ကိုယ်ပိုင်ကားကို လွတ်လပ်စွာ တရားဝင် ဝယ်စီးနိုင်မဲ့အချိန်
– ဖုန်းကဒ်ကို လမ်းဘေးဆိုင်တွင် လွယ်ကူသက်သာစွာ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် အချိန်
– အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို လာဘ်ငွေ ပေးစရာ မလိုတော့တဲ့ အချိန်
– မတရားလာဘ်စားမှုများကို သတင်းဂျာနယ်များတွင် တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်မဲ့ အချိန်…….
အဲလိုအချိန်တွေကျရင် သမ္မတကြီး ဖိတ်ခေါ်စရာ မလိုပါဘူး..။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လာရောက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို. စဉ်းစားမှာပါ..။
တစ်ခါက ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီးမှာ သံဃာတစ်ပါးကို စရဖ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်က စစ်တယ်။
မေးတာမဖြေတော့ မင်းရေကြည်အိုင်ဆိုတာ ကြားဖူးလားလို့မေးတော့
အဲဒီသံဃာကပြန်ဖြေတယ် မင်းရော အ၀ီစိ ဆိုတာ ကြားဖူးလားတဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆက်ဆက်သော စစ်အစိုး၇တို့ဟာ လူထုကသူတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုရလာဘို့နေနေသာသာ၊ သူတို့အနားမှာဝိုင်းနေတဲ့ အနီးကပ်ဆုံးသူတေါကတောင်ယုံကြည်မှုမရှိ နေ့တထိတ်ထိတ် ညတထိတ်ထိတ် နဲ့ နေကြရပါတယ်။ ဗိုလ်ခင်ညွန့်လက်ထက်က အမေရိကားနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ရောက်ဆရာဝန်ကြီးတွေ ကိုဖိတ်ပြီး၊ နိုင်ငံတော် ဧည့်ဂေဟာမှာ တခမ်းတနားထားပြီး၊ ကားကြီးကားငယ်တွေနဲ့ ဧည့်ခံလိုက်တာ၊ အဲ့ဒီအချိန်က ကျန်းမာရေးဌာနမှာတာဝန်ယူကြတဲ့ အရာရှိမင်းများကတောင် နှာခေါင်းရှုံ့ကြရပါတယ်။
ဗိုလ်နေ၀င်းလက်ထက်က တောထဲရောက်သွားတဲ့ ဗိုလ်ရန်နိုင်အပါအ၀င်၊ မြေပေါ်မြေအောက် နိုင်ငံရေးသမား (၃၁)ဦးကိုခေါ်ပြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံထူထောင်ရေးအတွက်အဖြေမထွက်ဘဲ၊ ခွာပြဲသွားကြတာ သေတဲ့အထိ တယောက်နဲ့တယောက် မမြင်ချင်ကြရလောက်အောင်ထိဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ဒါလူတဆုတ်စာရဲ့ယုံကြည်မှုကို တက်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က စကားလုံးလှလှလေးတွေသိပြီးဆွယ်ခဲ့ကြတာပါ။ နောက် ဗကပ အလင်းဝင်တွေကို (၁၉၇၀) ၀န်းကျင်လောက်က ရန်ကုန်မှာခေါ်ပြီး၊ အထူးအရာရှိရာထူးနဲ့ တိုက်ခန်းတွေ၊ ကားတွေ၊ စာအုပ်ဆိုင်တွေပေးပြီးစည်းရုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဗကပတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့ တပ်မှူးတွေကိုယ်တိုင်က မနာလိုဖြစ်လောက်အောင်အခွင့်အလမ်းတွေရခဲ့ကြတာကလား။ ဒါလဲ သက်ဇိုးမရှည်ပါဘူး။
နိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်အာဃာတကြီးတဲ့လူမျိုး လောကမှာမရှိပါဘူး ဆိုတာယုံကြပါ။
အဓိကကတော့ ယုံကြည်မှုပါ။ အစိုးရက လူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကို ရဘို့ဆိုတာ၊ အမေရိကန်လိုဒီမိုကရေစီဘိုးအေကြီးကတောင် မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ မြန်မာစစ်အစိုးရတဖြစ်လဲ၊ မဲခိုးမှုတွေတင်းကြမ်းနဲ့မဖုံနိုင်မဖိနိုင်အောင် သတင်းဆိုးကြီးခဲ့တဲ့အစိုးရဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့လဲလေ…လူဆိုတာက..လူပါဘဲ။ မော်တော်ကားဝယ်ခွင့်လေး၊ တိုက်ခန်းလေးတွေ အယောင်ပြလိုက်ရင်……..
BBC နဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက – ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြည်ပရောက် ၁၉၈၈ မျိုးဆက်များနှင့်မြန်မာ့ ပညာရှင်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်လာပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်၍ ဝိုင်းဝန်းကူညီထူထောင်ကြဖို့ ပြောဆိုချက်ကို ထောက်ခံပြောဆိုထားတာ –
…ဆိုတာကတော့ NLD ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအနေနဲ့ ဒီအချိန် သူပြောရမယ့်ဟာကို ပြောတာ –